Mpaninjara ny rano → Fandraisana am-bahoaka • Ofisialy • seranam-piaramanidina • Banks • Paositra
Mila dispenser rano amin'ny trano ho an'ny daholobe, birao, seranam-piaramanidina, banky ve ianao? Ny orinasa Water Point dia manolotra ireo mpamaky rano anaty tavoahangy, mpisotro, loharanon'ny mpitondra an'izao tontolo izao, izay mpizara manokana antsika any Polonina.
Ny iray amin'ireo singa manan-danja amin'ny vatan'olombelona rano. Ny fitaterana tsara ny vatana sy ny fahafaham-po amin'ny hetaheta dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fizotran'ny fiainana rehetra ao amin'ny vatantsika.
Mitombo ny fangatahana rano mandritra ny fahavaratra, rehefa mahatsiaro mangetaheta isika mandritra ny andro mafana. Noho izany, ny vahaolana tsara dia ny loharano, loharano ary ny famokarana rano misimisy kokoa amin'ny toerana ho an'ny daholobe.
Ireo fitaovana ireo dia manome rano madio sy mahasalama. Misaotra ireo faucets napetraka tao anatin'izy ireo, afaka misotro rano madio sy matsiro ny rehetra na mameno ny tavoahangy na tavoahangin-drano miaraka aminy. Ireo dispenserin'ny rano maoderina dia natao amin'ny fomba izay tsy ny olon-dehibe sy ny ankizy ihany, fa ny zokiolona koa dia afaka mampiasa azy ireo tsy misy olana.
Ny loharano misotro rano dia manome rano mifanaraka amin'ny fenitra takiana rehetra, noho izany dia azo antoka fa misotro ary, ankoatra izany, tena matsiro.
Ny fametrahana ny rano fisotro toy izany dia azo apetraka amin'ny toeram-pivarotana, toeram-pivarotana, seranam-piaramanidina, kianja ary trano fanaovana fanatanjahan-tena, ary koa any amin'ireo orinasa, sekoly ary hopitaly.
Ireo fitaovana ireo dia mahatonga ny olona hijanona ao amin'ireny toerana ireny ho mahazo aina sy afaka mikarakara ny fahasalamany amin'ny alàlan'ny fisotroana rano madio sy madio.
Ny rano misotro rano dia tokony ho hita na aiza na aiza andaniany fotoana betsaka, ary tsy mahazo fahafahana mividy rano madio na fisotro hafa ihany isika. Ny loharanom-pamokarana rano fisotro ihany dia tsy loharanom-pahalalana anaty rano mamy sy matsiro ihany koa, fa noho ny famolavolana manerantany sy maoderina koa, dia singa fanampiny mitarika ny haingo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Afaka mamatsy rano ny rano ny serivisy fisotroana rano, raha mampihena ny famatsian-drano sy ny fitsinjarana ny vidiny ary manome fiadiana amin'ny tontolo iainana amin'ny fampihenana ny fanjifàna tavoahangy plastika ary hampihenana ny famokarana fako.
Manampy amin'ny fampiroboroboana fomba fiaina mahasalama ny fisotroana rano sy loharano misotro rano, amin'ny fahazarana misotro rano voajanahary fa tsy zava-pisotro mamy.
Ny famatsiana rano madio kristaly tsy misy fetrany, azo jerena amin'ny sehatra rehetra manodidina ny famantaranandro, mampisondrotra ny hetsika ara-pahasalamana sy ny fanentanana ara-ekolojika ao amin'ny fiaraha-monina, ary mampihena tokoa ny vidin'ny mifandray amin'ny fanariana fako efa misy fako efa misy any an-tanàna.
Ny rano fisotro, ny loharano ary ny loharano ihany koa dia manangona fotoana, habaka ary vola izay natao taloha tamin'ny fitahirizana rano feno menaka.
Ireo dispenser rano fisotro dia vita amin'ny fitaovana maoderina, hiantohana ny maharitra maharitra sy ny vidin'ny fandidiana ambany.
Ny fanamboarana mety amin'ilay fitaovana dia manome antoka fa ny rano natsangana dia manana kalitao vaovao, fahatsorana sy fahatsapana mahafinaritra, ary azo antoka fa milamina mikrokolojika.
5 / 5 ( 16 vato )
rano-silinder tsy manisy ranorano madiofandefasana rano eny amin'ny seranam-piaramanidinadispenser rano ho an'ny bankydispenser rano ho an'ny biraodispenser rano amin'ny biraoTolotra fisotroan-drano hisotro rano ho an'ny paositradispensers ny lohataonarano karboninarano mafanamivantana avy amin'ny paompyrano ho an'ny biraorano ao amin'ny seranam-piaramanidinarano ao amin'ny biraorano mahasalama mahasalamarano mangatsiakarano lohataona ho an'ny trano fahazoan-dàlana
Jereo ireo sokajy hafa: